Ampio Animation CSS ao amin'ny tranokalanao WordPress miaraka amin'ny Plugin CSS Hero | Martech Zone
Ampio Animation CSS amin'ny tranokalanao WordPress miaraka amin'ny Plugin CSS Hero
Alatsinainy, 27 Jona, 2016 Douglas Karr
css-hero dia loharano mahafinaritra ho an'ny fanovana CSS amin'ny lohahevitra WordPress nandritra ny fotoana elaela. Ny fitaovana toy itony dia manao fanamorana tsotra ho an'ireo mpampiasa WordPress izay te-hampanjifa ny endrik'izy ireo, saingy tsy manana traikefa amin'ny kaody CSS ilaina.
CSS Hero Features dia ao koa
Manondro ary tsindrio Interface - Arotsaho ny totozy ary tsindrio ilay singa tianao hanovana sy ahitsy mba hifanaraka amin'ny filanao.
Lohahevitra Agnostika - Ampio herim-po Hero amin'ny lohahevitrao, tsy mila kaody fanampiny amin'ny loha-hevitrao no ilaina ary mamela fifehezana feno ny fananana \_ singa tianao ahitsy.
Fanovana ny maody fitaovana mivantana - Amboary sy amboary ny fomba fampisehoana ny lohahevitranao amin'ny fitaovan'ny tànana, ampio ny fampanjariana manokana ny fitaovana mivantana.
Mifantina loko mazava - Manampy ny lohahevitrao manokana amin'ny lohahevitrao izao dia mora toy ny manondro sy manindry loko iray, mitahiry ny loko ampiasainao farany koa i Hero.
Mampiasà endri-tsoratra 600+ - Ampio ny mikasika anao manokana amin'ny kilasy sy ny toetranao amin'ny Themes WordPress anao amin'ny alàlan'ny fisafidianana lisitra endritsoratra amin'ny endritsoratra sy glyphs malaza.
CSS sarotra - Ny fananganana gradients, aloky ny boaty, aloky ny soratra ary ny toetran'ny CSS maoderina rehetra dia teboka iray ary tsindrio raharaha.
Tsy misy hidin-trano - Mila mifindra amin'ny sehatra hafa? Tsy misy ahiahy, ny maherifo namboarina CSS rehetra dia azo aondrana amin'ny tsindry iray monja.
CSS fanovana Tantara - Ny CSS Hero dia mitahiry ny fanitsiana anao amin'ny lisitry ny tantara amin'ny antsipiriany, mora ny mandeha miverina sy mandroso amin'ny dingana tantara toy ny fipihana ny bokotra undo \_ hanavao.
CSS Hero Inspector - Inspector dia Plugin CSS Hero izay mamela fifehezana fanampiny amin'ny kaody noforonin'i Hero. Miaraka amin'ny inspector dia afaka manadio mora foana ianao, manova, manaisotra ny fomba namorona ny Hero na koa manampy ny anao manokana toy ny fanaonao matetika amin'ny fitaovana fanaraha-maso tranonkala tianao indrindra toa ny Inspecteur Chrome na Firebug.
Dian-tongotra maivana - CSS Hero dia natsangana hatramin'ny voalohany ho plugin "hazavana dian-tongotra", amin'ny ankapobeny dia mampiasa loharano fotsiny izy rehefa mandefa ny tonian-dahatsoratra css mivantana. Tsy hampihena ny fitantanana WordPress anao io na hanakorontana azy amin'ny takelaka safidy. Mampiasa fahatsiarovana kely izy io raha manao asa tena ilaina.
Vao natomboka ny tranomboky CSS3 Animate It, izay manolotra effets enti-mihetsika mahafinaritra marobe, ao anatin'izany ny bouncing, fade, flip, pulse, rotate, shake, ary hibigle. Tsindrio ny horonan-tsary tafiditra amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: Animationsary mihetsika CSScss bouncingcss malazocss Atsimbadihomahery fo csslohahevitra mahery fo csscss pulsacss mihodinamihozongozona csscss mikorisasarimiaina wordpresswordpress cssWordpress theme
Mety ho ilay mpisoratana lisitra ratsy indrindra